सा-वधान ! हात खुट्टा सँगै छालामा यस्ता परिवर्तन देखिए सचेत रहनुहाेला – Sandesh Press
सा-वधान ! हात खुट्टा सँगै छालामा यस्ता परिवर्तन देखिए सचेत रहनुहाेला । अधिकांश के-शहरुमा ब्ल-ड क्ल-टलाई राम्रो मानिन्छ जब हामीलाई चो-ट लाग्छ, तब क्ल-ट-ले र-गत बग्नबाट रोक्छ । यद्यपि, यही क्ल-ट कहिलेकाहिं त्यसबेला हुन थाल्छ, जतिबेला यसको आवश्यक हुँदैन ।
ब्ल-ड क्ल-ट त्यसबेला ख-तरनाक हुन्छ, जब यो मांसपेशि नजिक न-शामा बन्न थाल्छ । यसले रक्त सञ्चारलाई रोक्छ जसका कारणले कहिलेकाहिं यो घा-तक पनि हुन सक्छ । ब्लड क्लटको लक्षण के हुन्छ र कुन बेला हामीले डाक्टरसंग सल्लाह लिनुपर्छ छ भन्ने बारेमा लेख्दैछाै, जुन निम्न रहेका छन्:-
१) छाला रा-तो हुनु:- चो-ट लाग्दा र-गत जम्नु सामान्य कुरा हो जसकारण छालाको रंग पनि केही समयका लागि परिवर्तन हुन्छ । यसका लागि चिन्तित हुनु आवश्यक छैन । न-शामा रगत जम्यो भने त्यो ठाउँको छाला धेरै रातो हुन्छ र त्यहाँ छुँदा पनि तातो हुन्छ ।
२) हात खुट्टा दुख्नु:- सामान्यतया ब्ल-ड क्ल-ट हुँदा सु-जन तथा छाला रा-तो हुने लक्षणको रुपमा देखिन्छ । यद्यपि कहिलेकाहिँ केवल दुखाई मात्र पनि हुन सक्छ । प्राय: मानिस हात–खुट्टाको दुखाईलाई मांसपेशि तन्किएको भन्ने सम्झेर वेवास्ता गर्छन् र पछि गएर यो ख-तरनाक हुन्छ । ब्ल-ड क्ल-टको दुखाई हिंडडुल अथवा खुट्टा माथि उठाउँदा पनि हुन सक्छ।
३) छाती दुख्नु:- छाती दुख्नुलाई मानिसहरु सामान्यतया हृ-दयघा-त भन्ने बुझ्छन्, तर यो पल्मोनरी एम्बोलिज्मको लक्षण पनि हुन सक्छ । जसमा फोक्सोसम्म रगत पु-याउने बा-हिकामा रगत जम्छ । पल्मोनरी एम्बोलिज्मको दु-खाई तिव्र हुन्छ र सा-स फे-र्दा दुखाई झन् बढ्न थाल्छ । यस्तो स्थितिमा तुरुन्त डाक्टरसंग सम्पर्क गर्नु पर्छ ।
४) लगातार खोकी लाग्नु:- लगातार खोकी लाग्नु पनि यसको एउटा लक्षण हो । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार छातिमा दुखाइसंगै सुख्खा खोकी पनि लाग्न सक्छ। कहिलेकाहिं यसमा रग-त पनि देखा पर्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने हामीले समयमै डाक्टरसंग सम्पर्क राख्नु पर्छ ।
५) सा-स फेर्न समस्या:- फोक्सोमा र-गत जम्यो भने अक्सिजनको सञ्चार सुस्त हुन्छ जसकारण हामीलाई सा-स फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ । हामीलाई भित्रबाट कम्जोर भएको महसुस हुन्छ । भ-याङ चढ्दा स्वाँ-स्वाँ हुन थाल्छ । यदि यस प्रकारको समस्या अचानक महसुस भयो भने डाक्टरसंग सम्पर्क गर्नु आवश्यक छ।
६) बे-हो-श हुनु:- रगत जम्नाले फोक्सोबाट केमिकल निस्कन थाल्छ । ब्ल-ड अक्सिजनमा परिवर्तन आउन थाल्छ, ब्ल-ड प्रेसर र मुटुको चा-ल बढ्न थाल्छ । जसका कारण व्यक्ति अचानक बे-हो-श हुन्छ। यद्यपि यो लक्षण ब्ल-ड क्ल-टको सामान्य लक्षण होइन । प्राय: मानिसहरु पल्मोनरी एम्बो-लिज्मका कारणले पनि बे-हो-श हुन्छन् ।
७) मुटुको ध-ड्कन तिव्र हुनु:- अक्सिजनको सञ्चार कम हुँदा मुटुको ध-ड्कन ति-व्र हुन्छ जसका कारण छाती दु-ख्न पनि थाल्छ । यी सबैसंगै सा-स फेर्न समस्या हुन्छ । यसले पल्मोनरी एम्बो-लिज्म दु-खाईको संकेत पनि दिन्छ । थोरै र-गत जम्नाले पनि मुटुको ध-डकन तिव्र हुन सक्छ । रगत जम्ने क्रम बढ्दै गएपछि रगतको अक्सिजनमा कमी आउन थाल्छ ।
Prevस्कुल गएको पहिलो दिनमै यसरी फरर पढ्न सक्ने भइन प्यारि छोरी बिनिता (हेर्नुस् भिडियो )
Nextआज कुन स्थानमा हुँदैछ भीषण बर्षा? मौसम बिभागले दियो यस्तो चेतावनी